६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ आउँदै,कुनको कति ? - Nice Samachar
६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ आउँदै,कुनको कति ?
६ मंसिर २०७८, सोमबार ११:४८ 34 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ६ मंसिर। शेयरबजारमा २४ कम्पनीले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् । यी २४ कम्पनीले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ९३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।
यतिबेला यी २४ वटै कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुरीरहेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डकोे अनुमति पश्चात यी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् ।
सामान्यतया बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका २४ कम्पनीले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ९३ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने जनाएका छन् ।
तीमध्ये १४ वटा जलविद्युत, दुई इन्स्योरेन्स, ६ लघुवित्त र २ अन्य समूहअन्तर्गतका कम्पनी छन् । जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ  ।
आवेदन दिएका जलविद्युत् समूहका कम्पनीमध्ये मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन, थ्रि स्टार, रिभर फल्स, अपर हेवाखोला, डोर्दि खोला, सयपत्री हाइड्रोपावर, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड, विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि गरेर दुवैखाले शेयर निष्कासन गर्नेछन् ।
जलविद्युत्बाहेक अन्य ६ कम्पनीमा उपकार लघुवित्त, राष्ट्रिय उत्थान, जल्पा लघुवित्त, नेष्डो लघुवित्त, आर्दश लघुवित्त, सीवाईसी लघुवित्त र डिस मिडिया नेटवर्क छन् । यी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।